Ejiji ndị a na-ewu ewu nke Colombia | Akụkọ Njem
Dị ekike ndị Colombia
Maria | | omenala, General
Foto | Dailybọchị ndị Juu
Typicaldị uwe ndị a na-ahụkarị nke obodo bụ omenala na akụkọ ihe mere eme banyere ya. N'okwu Colombia, akụkọ ọdịnala metụtara uwe na-ekwu maka ọdịiche dị iche iche nke ndị mmadụ, ihu igwe na enyemaka nke ndị bi na ya. Ọ bụ ngwakọta dị n'etiti ọdịnala ụmụ amaala, ọdịbendị Spanish na nke Africa nke ebubatara n'oge oge ọchịchị.
N'ikwu okwu n'ozuzu, nwanyị ahụ na-eyi uwe mpekere abụọ. Uwe ejiji monocolor (nke na-abụkarị oji) nke a na-egosipụta ụdị dị iche iche na agba dị iche iche, ọ bụ ezie na ihe kachasịkarị bụ itinye ebe edo edo atọ, acha anụnụ anụnụ na ọbara ọbara na njedebe ikpeazụ nke uwe mwụda ahụ, na-enweta ọdịiche mara mma. Uwe elu nke na-agbakwunye ya nwere olu olu na enweghị olu, yana ogologo aka. Dị ka ngwa, a na-eji akpụkpọ ụkwụ nwere otu agba dị ka eriri sket na akwa uhie ma ọ bụ khaki ma ọ bụ ịchafụ.
N'aka nke ọzọ, a na-eme uwe nwoke ka ọ dabara na nke nwanyị. A na-ejikarị ya ogologo ọkpa ojii na uwe elu na-acha ogologo aka nke ịchafụ uhie na-agbakwunye n'olu ya. Akpụkpọ ụkwụ na okpu yiri nke ụmụ nwanyị na-eyi.
Otú ọ dị, Mpaghara mejupụtara Republic of Colombia emebela ụdị ejiji ha, na-ekewa uwe dị n'etiti nwoke na nwanyị iji nweta uwe ga-emeju ibe ha n'ụzọ zuru oke. na ndị mara mma nke ukwuu anya. Anyị na-ezute ha, n'okpuru.
1 Mpaghara Andean
3 Uwe ejiji Llanero
5 Mpaghara Orinoquía
6 Mpaghara Caribbean
7 Mpaghara Pacific
Uwe a na-ahụkarị maka ụmụ nwanyị nọ na mpaghara Andbian nke Colombia bụ nke nwere uwe ọcha na-acha ọcha, nke a na-eji eriri na ọnya chọọ ya mma. Ejiri zip na azụ ya. Uwe a nwere satin nwere agba cha cha ma ogologo ya dị n’etiti nwa ehi. N'okpuru ya, bụ atọ-ruffle petticoat. Ejiri uwe mwụda chọọ uwe mwụda ahụ mma, ma ọ bụ na-ese ya ma ọ bụ na-anwụ site na silk.
Dịka ngwa, ụmụ nwanyị nke mpaghara a na-eyi okpu n'isi ha nke na-etinye na ntutu ha anakọtara na braid ma ọ bụ ụta ma ọ bụ na-eyi ya dị ka isi n'isi n'akụkụ aka nri nke isi.
Banyere uwe nwoke, ọdịdị ya dị mfe O nwere uwe elu nwere olu na-emeghe ya, otu bọtịnụ gbadoro obi ya, na uwe ojii na-acha oji ma ọ bụ na-acha ọcha. Dị ka ngwa, a na-eji ọdụ ọdụ ọkpa ma ọ bụ ịchafụ silk na eriri akpụkpọ anụ.
Foto | NjemJet
Dị ejiji Antioquia nwere mgbọrọgwụ na ndị na-achị achị paisas nke narị afọ nke XNUMX, maka ụmụ nwoke, na ndị na-atụ kọfị maka ụmụ nwanyị.
N'ihe banyere ụmụ nwoke, ejiji ahụ nwere okpu Antioqueño a na-ahụkarị, na-acha ọcha na eriri ojii, poncho ma ọ bụ ruana (dabere na ihu igwe dị oyi ma ọ bụ na-ekpo ọkụ) na machete, espadrilles na carriel. N’ebe ụmụ nwanyị nọ, uwe ahụ nwere uwe ojii na mpempe akwụkwọ mara mma yana uwe elu ọcha na-acha odo odo mara mma na okpu.
Uwe ejiji Llanero
Ihe mejupụtara ya bụ okpu sara mbara, nke ejiri beaver ma ọ bụ nwee mmetụta, liquiliqui, trouzas na espadrilles ejiri eri na otu akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ. N'ebe ụfọdụ, uwe ejiji llanero ka nwere akwa sara mbara iji buru egbe na mma yana akụkụ dị n'ime iji jide ego.
N'ebe a nke Colombia, uwe ndị nwanyị na-ahụkarị nwere uwe mwụda nwere okpokoro ikpere ya na uwe elu ya ọcha nwere ihe olu na belt ndị amaala. Themụ nwoke na-eyi uwe ogologo ọkpa na uwe elu ejiri olu dị iche iche chọọ mma. N'ịbụ ndị nọ na mpaghara ebe okpomọkụ, ndị bi na mpaghara a na-eyi uwe ndị na-enweghị atụ, na-enweghị ọtụtụ uwe, mana ọ na-adọrọ mmasị.
Womenmụ nwanyị Llanera na-enwe mmasị iyi akwa sketị sara mbara, na-achọ ala ọ bụla mma na rịbọnụ na ifuru. Uwe elu nwanyị na-acha ọcha nwere olu na obere aka. Anaghị achịkọta ntutu isi mana ọ na-adị ka ọ tọgbọ chakoo. Banyere nwoke ahụ, uwe ejiji ya na-acha ọcha ma ọ bụ na-acha oji na-agbago n'etiti ụkwụ iji gafee osimiri na uwe elu ọcha ma ọ bụ ọbara ọbara. Dị ka ngwa, okpu sara mbara-okpu, ịbụ ọkacha mma ojii eguama.
N'iburu ihu igwe na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ na Caribbean, uwe ndị a na-eyikarị na-adị nro ma dị jụụ. Dịka ọmụmaatụ, na nke nwoke, a na-eji linen eme ihe maka uwe ogologo ọkpa na uwe elu, nke a na-eme na agba na-enwu gbaa. A na-eji combrero «vueltiao» mee ihe dị ka ngwa, ezigbo ewu ewu na ngalaba nke Bolívar, Magdalena, Sucre ma ọ bụ Córdoba.
N'ime ụmụ nwanyị, anyị nwere ike ikwu maka uwe dị ka Cartagena ebe mmetụta nke ọdịbendị Africa pụtara ìhè na uwe dị iche iche na akwa dị iche iche. Otu ihe atụ bụ palenquera, nke na-ekpuchi isi ya na akwa ebe ha na-ebu efere na mkpụrụ osisi nke ebe okpomọkụ, ụdị ụtọ na ụdị ọka ọka.
N’akụkụ ụsọ mmiri dị na Colombian Pacific, anyị na-ahụ ọnụnọ dị ukwuu nke obodo Afro-Colombian. Uwe a na-ahụkarị nke mpaghara a maka ụmụ nwanyị nwere uwe ogologo nkwonkwo ụkwụ na uwe elu nwanyị ejiri akwa dị nro na agba dị iche iche na-egosipụta ụda ụkwụ. Banyere ụmụ nwoke, uwe ha bụ uwe silk na-acha ọcha nwere ogologo aka, ogologo ọkpa denim na espadrilles nke cabuya, akwa ma ọ bụ akwa akwa nke otu agba.
Uwe ndị Colombia a na-ahụkarị na-egosi ụdị dịgasị iche iche nke mba ọdịbendị gbanyere mkpọrọgwụ na n'otu oge ahụ na-agwakọta nke ọma, na-akpata ọtụtụ ụdị uwe na ngwa ndị dị egwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Dị ekike ndị Colombia
Gaa na isi iyi nke Urederra